Ogaden News Agency (ONA) – Dagaal xoogan oo ka dhacay Sandhooleey/Marsin iyo nimankii ugu sareeyay amniga oo la tuuray
Dagaal xoogan oo ka dhacay Sandhooleey/Marsin iyo nimankii ugu sareeyay amniga oo la tuuray
Dagaal xoogan ayaa lagu qaaday xero ciidan oo ku taalay tuulada layidhaahdo Sandhooleey oo hoos timaada degmada Marsin. Dagaalkaa ayaa wararka hordhaca ah ay sheegayaan in lagaga dilay ciidamada maxaysatada ugu yaraan 12 askari meesha waxay wararku intaa ku darayaan inuu halkaa ku dhintay in magaalada Qabridahar laga diray ciidan u gurmada markii la keenaya magaalada dhawacan ciidanka maxaysatada.
War dag dag ah oo ku soo dhacay xafiiska wakaalada xalay oon ka helnay ila lagu kalsoon yahay oo ka mid ah maamulka Cabdi iley ayaa sheegaya in xilkii laga qaaday taliyihii Booliska waxay ugu yeedhaan Kililka oo la yidhaahdo General Maxamed-Yare iyo sidoo kale Taliyihii Asluubta Jamaal Dheere. Sida warkan naloogu sheegay waxaa shalay maxkamad qiimayn ah looga furay Jigjiga hayadaha amniga waxaloogu yeedho ee kililka, taasoo maanta lagu eryay labadaas komishner.iyo Sarakiil kale oo aanu magacayadooda ku daba jiro. Qiimaynta iyo ciqaabtan ayaa waxaa fulinayey siday noo sheegeen ilaha xogtan na soo gaadhsiiyay Cabdi Iley, iyo ku xigeenkiisa C/llaahi Itobiya.
Guddi wada jir ah ayaa lagu wareejiyay inay sii wadaan shaqada inta laga magacaabayo taliye cusub kuwaasoo naloogu kala sheegay Caynsane sheikh mahamed, Shukri Badal iyo General Qayo. Komishnerkii hore Maxamed yare ayaa lagu eedeeyay karti xumo,iyo In looga shakiyey inuu xidhiidh uu laleyahay Da’uud Mahamed Cali. Sidoo kale Komishnerkii Asluubta Jamaal Dheere ayaa isagana lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo anshax xumo, oo isaga xilkiina laga qaaday oo xabsiga loo taxaabay. Ciidanka asluubta ayaa dhamaantood lagu soo xereeyay xerada Qoomaadaha loo yaqaano, iyadoo jeelasha ay sii ilaalin doonaan booliska caadiga ah iyo Liyuu Booliska, sida uu noo sheegay qof xog ogaal ah.
La socda wixii soo kordha.